कोरियाबाट फर्केर राजनितिमा युवा, गरे आउँदो निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष उठ्ने घोषणा – Eps Sathi
February 14, 2022 2305
पछिल्लो समय युवा पुस्तामा राजनितीको मोह बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। नेपालमा भएका मात्रै नभएर विदेशबाट फर्केका युवाहरुमा पनि राजनितीबाट देश बनाउने हुटहुटी बढेको छ। विदेश हुँदा त्यहाँ देखेको विकास, राजनैतिक चलन, तथा अन्य धेरै सकारात्मक कुराहरुले उनिहरुलाई पनि आफ्नो देश त्यस्तै बनाउने इच्छा जागेको हुन सक्दछ।
विदेशी भूमीमा रहँदा सिकेको सिप, संस्कारलाई राजनिती मार्फत निति निर्माणको क्षेत्रमा पुगेर लागु गर्ने चाहाना स्वरुप विदेशमा रोजगारी तथा अध्यनका लागि गएर फर्केका युवाहरु राजनितीमा लाग्ने गरेका छन। यसैबिच दक्षिण कोरियाबाट फर्केर नेपालमा राजनिति गर्न थालेका युवा पोषराज खनालले आउँदो स्थानिय चुनावमा गाउँपालीका अध्यक्षको उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन।
कोरियाबाट फर्केका युवा पोषराजले गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै आफ्नो प्रतिबध्दताहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन। उनले गरेका प्रतिबध्दताहरु यस्ता छन। ‘अब आउने चुनाबमा म सुद्दोधन गाउँपालिका अध्यक्षका लागि जनताबाट निर्वाचित भएमा मेरो प्रतिबद्दता /घोषणापत्र : म निस्वार्थ रुपमा काम गर्ने छु । म कार्यभार समालेको पहिलो दिन र कार्यभार छाड्ने अन्तिम दिन आफ्नो नाममा भएको चल अचल सम्पती प्रमाण सहित सार्वजनिक गर्ने छु ।’
‘म पैसा कमाउनको लागि कुनै पनि काम , ब्यवसाय वा जागिरको लागि अनुचित दबाब र प्रभावमा पर्ने र पार्ने छैन। म आफुलाई गाउँ पलिकाको “सेवक” को रुपमा प्रस्तुत गर्ने छु । गाउँ पालिका भित्रका खाजा , ईन्धन लगायतका भौतिक सुबिधाका सबै अतिरिक्त खर्चहरुको कटौटी हुने छ । प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा नगरका सबै खर्चहरु पारदर्शी रुपमा वेवसाईटमा सार्वजनिक गरिने छ । नगर भित्र पावर, पहुच, बल र पैसाका आधारमा नभएर नियम कानुन र सिस्ट्मका आधारमा काम गर्ने पद्द्तीको बिकास हुने छ । गाउँ पालिका बाट हुने अधिकांश कामहरु डिजिट्ल माध्यमबाट हुने छन । गाउँ पालिका भित्रका अति बिपन्न परिवारलाई निशुल्क पानी र बिजुलीको ब्यवस्था हुने छ । ( निशुल्क खपत गर्न पाउने युनिट तोकिने छ ) ।’
‘पालिकाले पालिका भित्रका सबै नागरिकलाइ समेटन सक्ने स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याउने छ । पाच बर्ष भित्रमा गाउँपालिका भित्रका सबै बिपन्न नागरिकको लागी स्वस्थ्य बिमा निसुल्क गरिने छ । रिंग रोड , रंगशाला र बसपार्कका कामलाई तिब्रता दिईने छ । गाउँ पालिका भित्रका अति बिपन्न बिद्यार्थीहरुका लागि कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा दिईने छ । बिदेश जान चाहने सबैलाई निशुल्क सिप बिकासको तालिम दिईने छ । गाउँ पालिका भित्रै केही गर्न चाहनेहरुका लागि ३ बर्षका लागि ब्याज बिना निश्चित रकम सम्मको ऋण उपलब्ध गराईने छ । ऋणका लागि धितोको आवस्यकता पर्ने छ । गाउँ पालिका भित्र हुने साना ठुला सबै ब्यवसायहरुलाई करको दायरामा ल्याईने छ । यि सामान्य कुराहरु हुन यती पनि गर्न नसके मैले पुन कुनैपनि राजनीतिक वा सामाजिक पदमा पुन दाबि गर्ने छैन र यो नै मेरो अन्तिम राजनीतिक यात्राको रूपमा राखेर आफुलाइ अस्क्षम घोषणा गरि राजनीतिबाट सन्यास लिने छु जय नेपाल।’
Prevइजरायल जान कति खर्च लाग्छ? मासिक कमाई कति हुन्छ? जानौं प्रकृया
Nextहाइपर फण्ड र क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने नेपालीलाई जहाँ भए पनि पक्राउ गरिने